देख्ने बित्तिकै साक्षत अनौठो नाग देवता को दर्शन सँगै ॐ लेखेर एक Share गर्नुस माता दक्षिणकालीको दर्शन गर्नुहोस, तपाईले चाहेको सबै पूरा हुनेछ – Khabar PatrikaNp
देख्ने बित्तिकै साक्षत अनौठो नाग देवता को दर्शन सँगै ॐ लेखेर एक Share गर्नुस माता दक्षिणकालीको दर्शन गर्नुहोस, तपाईले चाहेको सबै पूरा हुनेछ
August 11, 2020 843
माता दक्षिणकालीको दर्शन गर्नुहोस, तपाईले चाहेको सबै पूरा हुनेछ!दक्षिणकाली मन्दिर राजधानी काठमाडौंबाट दक्षिण भेगमा करिब १७ किमिको दुरीमा रहेको छ। यो कालीदेवीको मन्दिर हो। यो मन्दिर राजा प्रताप मल्लद्वारा निर्माण गरिएको हो। यो फर्पिङको मुटुस्थित ऐतिहासिक महत्त्वले भरिपूर्ण मन्दिर हो। चारैतिर हरियालीले सजिएको यो मन्दिर दुई नदीको दोभानमा छ। यो मन्दिरमा कालीको मूर्तिबोहक अन्य देवी देवताको मूर्ति पनि छन्।पहिलेपहिले यो मन्दिरमा देवीकै मुखमा नरिवल फुटाइने गरेकाले देवीका मुखाकृति केही हदसम्म बचेको छ।
प्याज र नरिवलको तेल : नरिवलको तेलका साथ प्याजको रसलाई मिसाएर लगाउनाले कपालको विकासमा मद्दत गर्छ र कपाललाई पोषण पनि दिन्छ । प्याजको रसलाई तेलका साथ मिसाएर कपाल मसाज गर्नुहोस् । फेरि एक तौलियाले छोप्नुहोस् । यसबाट टाउकाको मृत कोशिकालाई हटाउन मद्दत गर्छ । जसबाट कपाल बढ्छ ।प्याजका साथ मह : कपालको विकासका लागि यो निकै प्रभावकारी घरेलु उपाय हो । यसका लागि प्याजको पेष्ट बनाएर त्यसमा केही थोपा मह मिलाउनुहोस् । यो पेष्टलाई कपाल कम भएको भागमा लगाउनुहोस् ।
Prevपाथीभरा माताको दर्शन गर्दै साउन २८ गतेको राशिफल हेर्नुहोस
Nextन्यूजील्याण्डमा फेरि देखापर्यो कोरोनाभाइरस
सुन्धाराको म’स्जिदमा डोजर च’लाउने पक्राउ
दैवपनि कति निष्ठुरी : पोखरामा २० घण्टाको नवजात शिशुमा कोरोना संक्रमण पुष्टि
टिकटकमा नाचेको भिडियो अपलोड गर्दा तिर्नुपर्‍यो १४ लाख जरिवाना !
गएराति भएको सवारी दु’र्घटनामा एकजनाको मृ’त्यु
कलिलो यु’वतीहरु राखेर यौ’न धन्दा : भिडियो हेर्नुहोस (27467)
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (25262)